Cover News Archives ⋆ Page2of 44 ⋆ Popular
ဒီနှစ်အကယ်ဒမီကို သက်မွန် စိတ်လျှော့ထားတယ်။ တစ်ခါလွဲခဲ့ဖူးတော့ အဲဒီကတည်းက အကယ်ဒမီနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကိုထားတက်သွားတယ်။ ဒီနှစ်မှာ သက်မွန်ဇာတ်ကား. . .
စင်​ပေါ်ကိုတက်​ပြီးတော့ ဆုယူတဲ့ စီနီ ယာကြီးတွေ တစ်​ခုခုအဆင်​မပြေဖြစ်​ တဲ့ အချိန်​မှာ ကျွန်​တော်​တို့ ဘေးနား ကနေ လုပ်​ပေးရမှာဖြစ်​တဲ့ အတွက်​ ဂုဏ်​လည်း ယူတယ်​။ အကယ်​၍စင်​ပေါ်မှာ အမှားအယွင်း တစ်​ခုခုဖြစ်​သွားရင်​လည်း ဘယ်​လိုလုပ်​မယ်​ ဆို တာကိုလည်း.…
ဒီ Box No.88မှာတော့ ပရိသတ် တွေအကြိုက်နဲ့ ထပ်တူဖြစ်စေမယ့် အရာတွေ အများကြီးပါမယ်လို့ ကျွန် တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။ သရုပ် ဆောင်တွေကအစ ကိုနေတိုးတို့၊ ထွန်းထွန်းတို့ မအူဝဲတို့နဲ့ ရိုက်ကူးမှာ ဆိုတော့. . .
တကယ် လုပ်နိုင်တယ်ထင်လို့လည်း ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ထက်​ဝင်ပြိုင်တာပါ။ ဒါကို အသိအမှတ် ပြုပေးဖို့ ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ မဲ ဆန္ဒတစ်ခုချင်းဆီနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ အလှမယ်တစ်ယောက်ဆိုတဲ့ ခေါင်း စဉ်အောက်မှာ ထက်ထက်ထွန်းလို့ မမြင်စေချင်ပါဘူး။ ထက်ထက်ထွန်း ဆိုတာ.…
သဲရဲ့ ဘုရား ပေးထား တဲ့ ဒီမျက်​နှာလေးက မပြုပြင်​ရဘဲနဲ့ ကြည့်​လို့ အဆင်​ပြေနေ သေးတယ်​ ဆိုတော့လေ ခွဲစိတ်​ဖို့တော့ လောလော ဆယ်​ အစီအစဉ်​မရှိသေးဘူး။ ကိုယ့်​မျက်​နှာလေးတော့ ကိုယ်​ကြိုက်​တယ်​။ ကျန်​တာ တော့ သိပ်​မကြိုက်​ဘူး။ သဲက.…
ညီမကကလေး သရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ကားတွေ အများ ကြီးရိုက်ခဲ့ပေမယ့် လူကြီးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ဆိုရင် အသစ် ဘဲလေ။ လူကြီးသရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ ရိုက်လို့ရှိရင်. . .
မြန်​မာ့ရုပ်​ရှင်​အနုပညာရှင်​သမားတိုင်း တန်​ဖိုးထားရတဲ့ ရုပ်​ရှင်​ တစ်​သက်​တာထူးချွန်​ဆုကို ဒီနှစ်​မှာလည်း ပေးအပ်​ချီးမြှင့်​သွားမယ်​လို့ သိရပါတယ်​။ အဆိုပါထူးချွန်​ဆုကို. . .
ဇာတ်​ကားအရှေ့ပိုင်းမှာတော့ မြန်​မာဝတ်​စုံလေးနဲ့ မြင်​ရမယ်​။ ပြီးသွား ရင်​ သရဲမ ဘာဝတ်​စုံမှမပါတော့ဘူး။ အိမ်​စည်​အခု ရိုက်​မယ့်​ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားက ပက်ပက်​စက်​စက်​ဝေဖန်​ခံရမှာ. . .
တစ်ခုပြော ချင်တာကတော့ ဆရာတို့ ဆုံးဖြတ် ချက်သည် အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ မှန် ကန်အောင် ကြိုးစားမယ်။ သေချာ တာကတော့ ဆရာတို့သည် လာဘ် ပေးလာဘ်ယူ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ဆရာ က ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်။ ဆရာက ဘယ်…
ပရိသတ်တစ်ယောက်ပေးတဲ့ ပန်းချီ ကားလေးတစ်ခုရထားတယ်။ လက်ရာ လည်း တော်တော်ကောင်းတယ်။ အဓိပ္ပာယ် လည်း အရမ်းရှိတယ်...